कलेज पढन गएकी १९ बर्षिय ‘अमिषा’ काठमान्डौंबाट बेपत्ता, खोजिदिन परिवारजनको गु’हार ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कलेज पढन गएकी १९ बर्षिय ‘अमिषा’ काठमान्डौंबाट बेपत्ता, खोजिदिन परिवारजनको गु’हार !
परिवारजनले छोरीलाई कुनै अ’तोपत्तो नभएको भन्दै शंका जाहेर गरेको छ । उनलाई कसैले उठाएको, दु’र्घटना भएको वा के भएको बारे अझै नखुलेकोले परिवारजनमा प’रेशानी छाएको उनकी आमाले बताइन् । समाजिक सँजाल मार्फत परिवारजनले छोरीलाई खोजिदिनको लागि आग्रह गरेको हो ।***यो समचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।***